Mon, Jan 17, 2022 | 21:44:10 NST
Posted: Saturday, May 19, 2018 11:03 AM (4years ago )
एम्बुलेन्समा मृत्युसँग संघर्ष गर्दैथिए एक बालक । अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बालक बोकेको एम्बुलेन्स जसोतसो त्यहाँबाट जाम छलेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दै थियो, तर सकेन । जाम खुल्यो । खुल्न त खुल्यो, तर फेरि जडिबुटी कोटेश्वरको सिमानामा जाम सुरु भयो । एम्बुलेन्सको साइरन एकोहोरो बजिरह्यो । लाग्थ्यो एम्बुलेन्स भित्र छट्पटाइरहेको बालकले चिच्याउँदै भन्दैछ ‘मलाई चाहिँ जान दिनु न है ।’ तर सुन्ने कसले ? बाटो उस्तै हो, बनेको बन्यै, अनि भत्केको भत्क्यै । अनि गाडीको के कुरा गर्नु हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि बढेको मात्रै हुन्छ । मान्छे धनी भएका हुन कि जस्तो पनि लाग्छ ।
जडिबुटी कोटेश्वरको जाममा दैनिकजसो परे पनि यति दुःखद घटनाको साक्षी बस्न पहिलोपल्ट लेखेको रहेछ । दिनभरि मनमा छटपटी भइरह्यो । लाग्यो यसरी हरेक दिन जामकै कारण अस्पताल समयमा पुग्न नपाएर कतिले ज्यान गुमाउँछन् होला ?
यस्तै यस्तै कुरा दिनैभरी खेले मनमा । यसरी कुरा खेलाउने भन्दा अरु के नै गर्न सक्छु र ?
माथिको घटनामा बिरामीको मृत्युको प्रत्यक्षदर्शी भएँ । मृतक को हो, उसँग मेरो कुनै नाता सम्बन्ध छैन । तर पनि मलाई यो घटनाले छोयो । त्यो एम्बुलेन्सभित्र मेरो आफ्नो कोही भएको भए?? अथवा त्यो एम्बुलेन्स भित्र तपाईंका कोही आफन्त भएका भए ? वा त्यो ट्राफिक आइल्याण्डमा उभिएका ट्राफिक प्रहरीका कोही आफन्त भएका भए ? वा त्यो एम्बुलेन्सलाई ओभरटेक गरेर बाटो छेक्ने बाइकवालाका कोही आफन्त भएका भए ?
खैर कुरा जामको हैन । गाडी धेरै छन्, सडक ‘साँघुरो’ छ, आकाशे पुल छैन, लेन अनुशासनको हालत उस्तैछ । धेरै कारण दिन सक्छौँ, यदि जाम किन भयो कसैले सोधे भने । तर के चोकमा बसेका ट्राफिक प्रहरीले एम्बुलेन्सको साइरन सुन्दैन ? कि सुनेर पनि नसुनेजस्तो गर्नु उसको बाध्यता हो ? कि अरु सामान्य गाडी जस्तै एम्बुलेन्सले पनि ट्राफिकले जान भनी अगाडि बढ्न पाउँदैन ।
बाइकले लेन मिचेर अघि बढ्ला, अरु गाडीले लेन मिच्ला र जरिवाना तिराउँला भनेर ढुकेर बस्ने ट्राफिक प्रहरीले एम्बुलेन्सको साइरन किन सुन्दैन ? ट्राफिक प्रहरीको काम केही कारणबस अवरुद्ध भएको बाटो खुलाउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई । कम्तिमा एम्बुलेन्सको लागि चाहिँ बाटो खुलाइदिनुपर्छ नि । सबैलाई यस्तो नलाग्न पछि सक्छ ।
ट्राफिक प्रहरीले बेला बेलामा राम्रा काम गरेर नागरिकको मन जित्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । कहिले नो हर्न अभियान चलाएर त कहिले जेब्राक्रसिङ बाहेक अन्तबाट बाटो काट्न नपाउने नियम लेराएर । ती अभियानमा नागरिकले साथ दिँदै गर्दा अभियान सुरु गरेको ट्राफिक प्रहरीले कत्तिको अनुगमन गर्यो ? ९ दिनमा नौलो २० दिनमा बिर्सियो भनेजस्तै अहिले ती अभियान नागरिकले बिर्सिसके ।
म जडिबुटीको जाममा एम्बुलेन्सको साइरन सुन्दै जाम खुलोस अब भन्ने कामना गर्दै गर्दा यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कर्मचारीलाई झाँट्दैरैछन् सडक व्यवस्थापनको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै । गृहमन्त्री बने लगत्तै मन्त्रीज्यूले ट्राफिक जाम न्यूनीकरणको लागि पनि निर्देशन दिनुभएको रहेछ । मन्त्रीज्यू ट्राफिक जाम न्यूनीकरणको कुरो तत्कालका लागि छोडौँ पहिले एम्बुलेन्सलाई सहज ढंगमा अगाडि बढ्न दिउँ न हुन्न ?
ट्राफिक जाम त सदियौँ देखिको परम्परा हो नि यो अहिले सकियो भने त परम्परा तोडिन्छ, मान्छेहरु ठिक–ठिक समयमा ठाउँमा पुग्छन् बहाना पो सकिन्छ त जाम थियो अनि ढिलो भयो भन्नलाई । नो हर्न, जेब्राक्रस, आकाशे पुल, फुटपाथ ब्यापार सबै बिर्सिदिम् । सबैभन्दा पहिला एम्बुलेन्सलाई सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाम् न हुन्न त ?
त्यसभित्र मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका विरामी बाँचे भने आशीर्वाद दिनेछन् । एम्बुलेन्स छिटो अस्पताल पुग्न पायो भने विरामीले जीवनदान पाउँछ । हाम्रो त के छ र ? हदै भए गन्तव्यमा छिटो पुग्छौँ वा ढिलो पुग्छौँ । तर जीवनभन्दा टाढाको गन्तव्य कुनै छैन ।